Xogta ka timid WordPress 3.1 - Geofumadas
3.1 news WordPress
Febraayo, 2011 tabo cusub, Internet iyo Blogs
Cusboonaysiinta cusub ee WordPress ayaa timid. Waxyaabo badan ayaa isbeddelay mawduucan maareynta maareynta munaasabadaha sanadihii la soo dhaafay, hadda waa casriyeynta qoraallada cusub waa badhan fudud. Kuwa u dulqaadanaya iyaga oo u maraya FTP, mararka qaarkood waxaan xitaa u maleyneynaa in ay fududahay inaan luminayo nimcada lambarka. Laakiin sida fiican ee qalab isticmaalka bilaashka ah ayaa u yeelan kara heerkaas horumar.
Novelties waxay ku jiraan dhinacyada iyo isticmaalka, waxay mar hore muhiim u yihiin iyo sida qalab furan, waxay u hoggaansamaan isbedelada ay codsadeen bulshada.
Kantaroolka weyn ee aan aragno.
Baadhitaan la yiraahdo "Screen Options" ayaa lagu daray, kaas oo kuu ogolaanaya inaad qoondeeysid waxa aad rabto in aad aragto ama qarsato. Waa isbeddel weyn oo aad u weyn, iyadoo ku xiran waxa aan ku shaqeyneyno, waa mid xuddun uuna leh oo ku xiran xarunta AJAX ee jiidashada albaabada.
Arrintaas, waxaan idin tusayaa gudida soo gelista, fiiri in aan dooran karo meelaha laga arki karo kormeerid iyo xitaa imisa xawaaladood ayaa la geeyaa. Farsamadani waa mid aad u wanaagsan, tan iyo markii qiyaasta aan ku rakibno khidadaha, meelaha waxaa inta badan lagu daraa in la xadido shaqada.
Waxa kale oo aad dooran kartaa inta jeer ee aad rabto inaad aragto. Bal qiyaas qoraalka qoraalka ah ee boostada cusub iyada oo aan wax caqabad ku aheyn.
Gaar loola xiriiri karo guddiga maamulka
Waxaa lagu muujiyay kor, barbar la mid ah Blogger, iyada oo si dhakhso ah loogu heli karo guddiga, widgets, gelitaan cusub, waxaa jira foomka raadinta iyo sidoo kale muujinaya updates dhawaan. Aad u fiican, inkasta oo aanan ku arkin haddii aad awoodi kartid meel kale oo aad ku kaydsan kartid ama aad u habeyn kartid. Waxaan u maleynayaa inay badbaadin doonto khatarta ah in lagu furo qalad.
Barnaamijyada waxaa jira warar kale oo ka badan cabsida content ee aad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso plugins. Ma aha in aad sheegto qaar ka mid ah caro, si fiican uga tagto sida ay tahay waxaa lagu dhawaaqay.
Waxaa jira baaldi nacnac ah oo loogu talagalay horumarinta sidoo kale, oo ay ka mid yihiin noo cusub Taageerada qaabka boostada taas oo fududeyneysa mowduucyada si loo abuuro tumblelogal la qaadi karo oo leh qaabab kala duwan ee noocyada kala duwan ee posts, awoodaha cusub ee CMS sida bogag arji ah oo loogu talagalay noocyada nooca caadiga ah, a Shabakad Cusub Network, dib-u-habayn nidaamka nidaamka dhoofinta iyo dhoofinta, iyo kartida waxqabadka taxonomy sare iyo qodobo qaas ah.
Wakhtiga wanaagsan ee WordPress-ga.
Post Previous«Previous Taasi waxay dib u soo celineysaa AutoCAD ws XUM
Post Next Google Docs hadda waxay akhrisan karaan fxlfx filesNext »